Burner Coal Pulverized mora vidy ho an'ny mpamatsy plastika mpanafika sy orinasa | YiZheng
Zert mitsivalana rojika zezika C ...
Organic Type vaovao & Com ...
Zezika Rotary Drum Compound ...
Pulverized Coal Burner dia karazana fitaovana fanamainana lafaoro vaovao, miaraka amin'ny tombony amin'ny tahan'ny fampiasana hafanana avo, fitsitsiana angovo ary fiarovana ny tontolo iainana. Mety amin'ny karazana lafaoro fanafanana rehetra izy io.
Inona ilay Burner Coal Pulverized?
ny Pulverized Coal Burner dia mety amin'ny fanafanana lafaoro fandrahoana annealing isan-karazany, lafaoro fipoahana mafana, lafaoro rotary, lafaoro fandoroana marina, lafaoro fandoroana, lafaoro fanariana ary lafaoro fanamainana mifandraika Izy io dia vokatra mety amin'ny fitsitsiana angovo sy fiarovana ny tontolo iainana, raisin'ireo mpanjifa tsara izy.
Endri-javatra an'ny Pulverized Coal Burner
1. Manangana rafitra vaovao, manova ny mekanika mpandoro nentim-paharazana, fampiasana manokana ireo mpandoro doro rotary mba hamahana ny doro nentin-drazana izay mora ifamatorana, tsy afaka mandoro tanteraka sns.
2. Ny mari-pana amin'ny afo, ny fitsitsiana angovo ary ny fandoroana tanteraka.
3. Manangana ireo akora manokana misy afon'afo avo lenta, lava andro iainana
4. Ny vidin'ny famokarana dia ambany, ny 1/3 fotsiny dia mandoro menaka.
5. Miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta, mety hifehezana ny mari-pana mitambatra, famoahana agregate amin'ny alàlan'ny amponga mifangaro maina.
7. Famerenana ny mari-pamantarana ny mari-pana amin'ny seranan-tsambo ho an'ny mpanova hatetika ny milina arintany, ovao ny mari-pana mitambatra amin'ny alàlan'ny fanovana hatetika mifehy ny habetsahan'ny arintany.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny Pulverized Coal Burner？
ny Pulverized Coal Burner manana rafitra torolàlana ho an'ny famatsian-drivotra marobe an-dàlam-pandrosoana sy multi-noza, izay afaka mamokatra rivotra avo lenta amin'ny fotoana fohy, miaraka amin'ny fandoroana azo antoka, ny fampiasana hafanana be, ny fanesorana setroka sy ny vovoka, ny fahombiazany, ny fitsitsiana angovo ary ny tombony hafa:
(1) Ny fotoana ipetrahana ny arina mibaribary ao amin'ny faritry ny mari-pana ambony Pulverized Coal Burner lava, noho izany dia avo ny fahaizan'ny fandoroana, ary ny flue dia feno tsy misy setroka mainty, fa setroka fotsy misy setroka
(2) Ity karazana Pulverized Coal Burner manana fotoana fiakaran'ny maripana fohy kokoa mandritra ny fanafanana, ny hafanan'ny hafanana avo, ny kalitaon'ny saribao ambany, ny fampiharana betsaka ny karazana arina ary ny tombontsoa ara-toekarena avo
(3) Ny Pulverized Coal Burner mora mirehitra, manafana haingana, ary miharihary fa nihatsara ny fahombiazan'ny asa
(4) Ny famatsian-drivotra anatiny sy ny fampidirana arintany an'ny Pulverized Coal Burner azo ovaina araka ny takiana, ary ny hafanan'ny lafaoro sy ny halavan'ny lelafo dia azo ovaina ao anatin'ny fotoana fohy hamaliana ny tena filàna.
(5) Ny mari-pana anatiny an'ny Pulverized Coal Burner dia mitovy fanamiana, lehibe ny toerana fanafanana, ny slag tsy miraikitra amin'ny tany.
Fampisehoana horonantsary burner Pulverized Coal Burner
Safidy maodely Pulverized Coal Burner
Savaivony ivelany (mm)
Savaivony anatiny (mm)
Teo aloha: Mpanangona vovoka amin'ny rivodoza
Manaraka: Masinina fanamafisana ny onja fanoherana
Fampidirana Inona ny masinina fonosana roa Hopper Quantitative? Ny Double Hopper Quantitative Packaging Machine dia milina famonosana milanja mandeha ho azy mety amin'ny varimbazaha, tsaramaso, zezika, simika ary indostria hafa. Ohatra, ny famonosana zezika granular, katsaka, vary, varimbazaha ary masomboly, fanafody, sns ...
Fivarotana lozisialy lovia rojo
Fampidirana Inona ny masinina vita amin'ny Chain Plate Composting Turner? Ny masinina Chain Plate Composting Turner dia manana endrika tsy misy dikany, tsy dia mihinana herinaratra moto, reducer ho an'ny tarehy mafy ho an'ny fandefasana, tabataba ambany ary fahombiazana avo. Singa lehibe toy ny: rojo mampiasa ampahany avo lenta sy mateza. Ny rafitra hydraulic dia ampiasaina amin'ny fampiakarana ...
Fampidirana Inona ny masinina fampifangaroan'ny zezika kapila? Ny Machine Disc Fertilizer Mixer Machine dia mampifangaro ireo akora manta, misy kapila mampifangaro, sandry mifangaro, frame, fonosana boaty ary mekanisma fandefasana. Ny mampiavaka azy dia ny misy varingarina voarindra eo afovoan'ny kapila mifangaro, ny fonosana varingarina dia namboarina teo ...
Turner fanangonam-bokatra Hydraulika
Fampidirana Inona ny milina famonoana fako voajanahary? Ny milina Hydro Organic Waste Composting Turner dia mandray ny tombony azo avy amin'ny teknolojia famokarana mandroso any an-trano sy any ivelany. Mampiasa tanteraka ny valin'ny fikarohana bioteknolojia avo lenta izy io. Ny fitaovana dia mampifandray ireo mekanika, herinaratra ary hydrauli ...
Fampidirana Inona no atao hoe Gran Extrusion Fertilizer Granulator? Ny milina Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator dia masinina tsy misy maina ary fitaovana granulation tsy misy fanamainana somary mandroso. Izy io dia manana tombony amin'ny haitao mandroso, famolavolana antonony, firafitra mifangaro, zava-baovao ary fampiasana, angovo ambany co ...
Fampidirana Inona no masinina fanorotoroam-bokatra semi-wet? The Machine Semi-wet Material Crushing Machine dia fitaovana fanorotoroana matihanina ho an'ny fitaovana manana hamandoana avo sy fibre maro. Ny milina fanosorana zezika avo hamandoana dia mandray ireo rotors misy dingana roa, midika izany fa miakatra sy midina ny famongorana dingana roa. Rehefa fe ...